पब्जी टिम ‘ज्यानमारा’ को संघर्षको कथा « Tech News Nepal
पब्जी टिम ‘ज्यानमारा’ को संघर्षको कथा
बिहिबार, असार २, २०७९
काठमाडौं । नेपालको ई-गेमिङ क्षेत्रमा ज्यानमारा नाम परिचित छ । यो नाम पब्जी मोबाइल गेमसँग सम्बन्धित छ, जसले व्यावसायिक रूपमा पब्जी खेलेरै देशविदेशमा आफ्नो उपस्थिति जमाइरहेको छ ।
पब्जी माेबाइल गेम विश्वमा पहिलाे पटक २०१७ काे मार्चमा सार्वजनिक भएको थियो । सोही वर्षको अन्त्यतिर नेपालमा पनि याे गेम भित्रियाे । विदेशमा जस्तै नेपालमा पनि पब्जी गेम उत्तिकै लोकप्रिय बन्यो, विशेषगरी युवा जमातमाझ ।
झापाका युगिन सम्बाहाम्फे लिम्बु पनि सुरूका दिनमा साथीभाइसँग पब्जी खेल्ने गर्थे । पब्जी नेपालमा भित्रिएको केही महिनामै उनी एमबीए अध्ययनका लागि अष्ट्रेलिया गए ।
अष्ट्रेलिया पुगेपछि त उनी झनै पब्जी खेल्न थाले । युगिन पढाइ र कामपछिको खाली समय सबै पब्जी खेलमै बिताउँथे ।
देश र आफन्तदेखि टाढा विदेशमा बसिरहेको बेला पब्जीमार्फत दाजुभाइ र साथीसँग जोडिन पाउँदा उनलाई नेपालमै भएको महसुस हुन्थ्यो । पब्जी खेलमा उनी यति धेरै रमाउन थाले कि, काम वा कलेजबाट फर्किरहँदा गाडीमा समेत पब्जी नै खेलिहरेका हुन्थे ।
उनी ‘ज्यानमारा स्पोर्ट्स’ को नामबाट ब्याटल ग्राउण्डमा उत्रिन थाले । पब्जी गेमिङ तथा ईस्पोर्ट्समा रुचि राख्नेहरुका लागि पक्कै पनि यो नाम नौलो होइन ।
२०१८ तिर बनेको टिमलाई युगिनले ‘ज्यानमारा’ नाम दिए । तर पब्जीमा दर्ता गराउन ज्यानमारा नाम एकदमै आक्रामक सुनियो । गेमको प्रकृतिअनुसार नाम त सुहाउँदाे नै थियो ।
तर यसको शाब्दिक अर्थ भने हिंसात्मक थियो । यसैले गर्दा दर्ता प्रक्रियामै अप्ठ्यारो आउने देखेपछि युगिनले टिमको नाम ‘ज्यानमारा’ बाट ‘जेएम स्पोर्ट्स’ मा परिवर्तन गरिदिए ।
पब्जी गेम खेलिरहँदा युगिनको समय रमाइलोमा मात्र बितिरहेको थिएन । उनले आफूजस्तै पब्जी खेलमा लाग्नेहरुको जमात पनि फेला पारेका थिए । र, त्यसभित्रबाटै एउटा बलियो टिम पनि तयार पारिसकेका थिए ।
यही टिमले पब्जीका स्थानीय हुँदै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा आफ्नो बलियाे उपस्थिति देखाइरहेकाे छ । आज उनै युगिनले टेकपानासँग सुनाएको ‘ज्यानमारा’ टिमको संघर्षको कथा यो भिडिओमार्फत् प्रस्तुत गर्दैछौं ।
डोमेन लिनुभयो ? यसरी गर्नुहोस् निःशुल्क वेब होस्टिङ
काठमाडाैं । निःशुल्क डोमेन लिने तरिकाबारे हामीले यसअघि नै सामग्री तयार पारिसकेका छाैं । वेबसाइट
नेपाली सडकमा टेस्लाको सेल्फ ड्राइभिङ कार, यस्तो छ सञ्जय गोल्छाको अनुभव
काठमाडाैं । टेस्ला विश्वभर आकर्षण रहेको विद्युतीय कार निर्माता कम्पनी हो । सन् २००३ मा
डिजिटल भुक्तानीलाई सहज बनाउन के गर्दैछ राष्ट्र बैंक ?
नेपालमा पछिल्लो समय डिजिटल कारोबार मौलाउँदै गएको छ । कुनै समय लाइनमा बसेर बिजुली, खानेपानी
यस्तो छ वाई-फाई सिक्स सहित डिशहोमको ३०० एमबीपीएस इन्टरनेट
काठमाडाैं । नेपालमै पहिलोपटक वाई-फाई सिक्समा आधारित उच्च गतिको इन्टरनेट उपलब्ध गराउने इन्टरनेट सेवा प्रदायकमा